ATN: ဘယ်သူ့ကိုမှ မတွေ့ချင်တော့ဘူး
၀မ်းနည်းတယ်.. တခုခုကို စိတ်နာမိတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်လိုပါဘဲ။ ကျနော်လည်း သူ့စာတွေကတဆင့် ခင်မင်ခဲ့ရပြီး ကဖိုးဇေနဲ့ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးချင်ခဲ့တာပါ။ ထိုင်းကို ရောက်ရင် သူနဲ့ တွေ့ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ အခုတော့…. ကိုယ့်ဖက်က လူတွေကတော့ တဖြုတ်ဖြုတ်ဘဲကွာ….လို့ ပြောရလောက်အောင် ကျနော်တို့မှာ အဆုံးအရှုံးကြီးမားလှပါတယ်။
harr, what went wrong, ko Aung K?
i was going to write to him.
i didn't know Ko Pho Zay is Guru.
his very first short-story that i read is called
"MAY MAY YAY THARR HLA HLA PA PA PHAR POVT". beautiful homesick writing!
you can ask SONESEAYAR to publush his works, i think.
BTW, ko Hnin Khar Moe ka 207 ka larr bya?
aye byar ta york twarr pyan pe!
A HISTORIC SALUTE TO THEM
REST IN FREEDOM!
REST IN THE HISTORY!!!
Asaco-founder of ABSDF( ALL BURMA STUDENTS' DEMOCRATIC FRONT) I'd like to post this old one on its 20th birthday, 01/11/2008 because i don't have latest poem. It's called THE REVOLUTION RIVER. A SALUTE To All My Comrades Who Has Died And Who Are Sitll Struggling On Our Mainvein!!! KEEP FIGHTING!
THE REVOLUTION RIVER
Wild wide river running slide
There's temporary guerrilla camp
On the bushy river bank
A medic's busy at the clinic
The student warrior's ready to give birth
BIRTH- the accidental art of two lovers
THE BABY- the original part of new-comer
Dear the great freedom fighter,
Tonight, you have become my father
Tonight, she has become my mother
I know you have died at the front fine
Now she looks at me with tearful eyes
She cheers me up withapainful smiles
She gives you historic respectful salute
She promises you to keep fight for the truth
She said to me "You must travel, You must struggle"
"You must complete this juorney, You must gain the exact victory"
No funeral for you yet
No birth-ceremony for me yet
Until we are completely liberated
The river must go ahead
this one is my salute to GURU. from ayannaing.blogspot.com
မမြင်ဖူး မသိဖူးပေမဲ့ စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ် အကို။
တိုင်းပြည် အတွက် သားကောင်းတစ်ဦး ကြွေလွင့် ခဲ့ရတဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်း စွာ ဦးညွတ် အလေးပြု ပါတယ် ဗျာ....။
ko aung K,
i dumped this poem at
your post about ko myo aung naing too!
sorry byar, if this isamess on your page!
We don’t care of milky ways patrol
We don’t care of galaxy prison
We don’t care of sun-born troops
We don’t care of ironic abyss rules
We don’t care; we--just--don’t--care!!!
FREE ALL THE POLITICAL PRISONERS RIGHT NOW!!!
အရမ်းကို စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ် အကိုကြီးရေ။
ကျွန်တော်သူကို မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ချစ်ခင်တဲ့လူတွေထဲကဆိုတော့ အသိတစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားသလိုခံစားရတယ်။ သူရေးတဲ့ တောထွက်တဲ့ဆောင်းပါတော့ဖတ်ပြီးကြိုက်ဖူးတယ်။ သူမှန်းမသိခဲ့ဘူး။
ပုရစ်တွေ ကဗျာကိုကြိုက်လို့ပြန်ပြီးတင်ချင်တယ်။
ကွန်မန့်ရေးသွားကြတဲ့ ဒူကဘာ၊ မပန်၊ ကိုပေါ၊ ညီငယ် ကောင်းကင်ကို၊ ဧကရာဇ်ရန်နိုင်၊ တောင်ပေါ်သား၊ ညီမ ချိုသင်း၊ ညီငယ် လင်းထက်၊ ညီငယ် အိုင်လွယ်ပန်၊ ညီငယ် ကိုအောင်၊ ညီငယ် တေးမွန် - အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
A'karikz Yannaing - Don't be sorry. This is notamess, butacompliment. And thanksalot for your poem. It is very encouraging.